Guggulsterone poda (95975-55-6) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / Guggulsterone upfu
Rating: SKU: 95975-55-6. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika kuhutano hweGuggulsterone powder (95975-55-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Raw Guggulsterone powder Basic Characters
Raw Guggulsterone powder mukushandiswa
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum mukul, Commiphora mukul, Commiphora wightii, Gomme Guggul, Gomme-Resine de Guggul, Guggal, Guggul Gum Resin, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulu, Guggulu
Guggulsterone Ushumiri hwePudder
Guggulsterone poda ndeye phytosteroid inowanikwa mune resini yemuti we guggul, Commiphora mukul. Guggulsterone powder inogona kuvapo seimwe yemaviri stereoisomers, E-Guggulsterone powder uye Z-Guggulsterone powder. Muvanhu, inoshanda semupikisi weiyo farnesoid X receptor, iyo yaimbofungidzirwa kuti inokonzeresa kudzikira kwecholesterol muropa. Ongororo dzinoverengeka dzakaburitswa dzinoratidza kuti hapana kudzikiswa kwakazara kwecholesterol yose kunoitika uchishandisa madosi akasiyana siyana eGuggulsterone powder, uye mwero wepasi-density lipoprotein ("yakaipa cholesterol") yakawedzera muvanhu vazhinji. Zvakangodaro, Guggulsterone powder chinhu chinowanikwa mune zvakawanda zvinovaka muviri zvinowedzera.
Oleogum resin (inozivikanwa seguggul) kubva kumuti weguggul, Commiphora mukul, unowanikwa muIndia, Bangladesh, nePakistan, yakashandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana zvinosanganisira hyper-cholesterolemia, atherosclerosis, rheumatism, uye kufutisa kwezviuru zvemakore. Guggulsterone poda yakasarudzika kubva kune guggul yakaonekwa seye bioactive inhengo inokonzeresa kurapa kweguggul. Kubva chidzidzo chekutanga chichiratidzira ekurapa mhedzisiro yeguggul mune yemhando modhi mu1966, yakawanda nzira yekumberi uye yekiriniki yakaitwa. Kunyangwe misiyano mukugadzirwa dhizaini, maitiro ehunhu, kuwongorora kwehuwandu, saizi yemuenzaniso, uye huwandu hwehuwandu hwevanhu hunoguma nekumwe kusawirirana mukupindura kurapa, iyo yekuwedzera data kubva mu vitro, preclinical, uye kiriniki zvidzidzo zvinotsigira zvakanyanya marapirwo ekuti guggul yakatsanangurwa mu chinyorwa chekare cheAyurvedic. Nekudaro, ramangwana zvidzidzo zvekiriniki zvine hukuru hwakakura uye yakareba izwi zvinoda kusimbisa izvi zvirevo. Iyo yemoyo mabhenefiti ezvekurapa anotorwa kubva kune akawanda mafekitori zviitiko zvine chekuita neguggul kana Guggulsterone poda, kunyanya iyo hypolipidemic, antioxidant, uye antiinfigueatory zviitiko. Yakave yakasimbiswa kuti Guggulsterone poda inopesana ne farnesoid x receptor (FXR), yakakosha transcriptional regulator yekuchengetedza cholesterol uye bile acid homeostasis. Iko kupesana kweFXR naGuggulsterone poda kwakarongedzwa senzira yekukanganisa hypolipidemic. Imwe ongororo ichangoburwa inoratidza kuti Guggulsterone poda inokwenenzvera iyo bile munyu pombi yekushambadzira pombi (BSEP), mutakuri wekufambisa anokonzera kubviswa kwecholesterol metabolites, bile acids kubva pachiropa. Kukwidziridzwa kwakadai kwekutaura kweBSEP neGuggulsterone poda kunoda cholesterol metabolism mu bile acids, uye nekudaro inomiririra imwe nzira inogona kuita yeiyo hypolipidemic chiitiko. Guggulsterone powder yakawanikwa ichinyatso kudzivirira iyo nyukireya factor-kappaB (NF-kappaB), yakaoma mutongi wemhinduro dzekuputa. Kudzvinyirira kwakadai kweNF-kappaB kuisirwa neGuggulsterone poda kwakarongedzwa senzira yekurwisa kupisa kweGuggulsterone poda.
Uye Ndezvipi Zvimwe Zviratidzo Zvokuneta?
Zvakanzwisisika kwandiri kuti kana munhu aigona kuunganidza mafuta anopisa zvinokonzera mahomoni ehroid pamwe neaya adrenergic hormones (eg adrenaline) chimwe chinhu chinoshamisa chinoguma. Uyewo, zvinonakidza ndezvekuti ECA yakagadzika maitiro ekuderedza kuwanda kwehomoni yehomoni inopararira muropa munguva. Guggulsterone powders vanoita basa rakakura rekudzivisa kuderedzwa uku, nokudaro kuchengeta zvose zvehutano mafuta zvinopisa zvinoshandiswa panzvimbo yakakwirira.
Nzira dzekupedzisira dzinogona kubatsirwa neGuggulsterone powders muhondo yekupisa mafuta iri mune ketogenic kudya uye kukura kwehomoni kushandiswa. Nokufamba kwenguva, ketogenic kudya kunoderedza hutachiona kuburikidza nekuderedza kutendeuka kweT4 kune yakasimba T3. Zvakare, uko Guggulsterone powders yaitorwa zuva nezuva kwemwedzi mitatu, ivo vakagadzira kudzikira kunofambira mberi kwezvironda mune ruzhinji rwevarwere. Ne tetracycline, iyo pesenti yekudzora muzvironda zvekuzvimba yaive 3% kana ichienzaniswa ne65.2% neGuggulsterone powders. Sezvauri kuona, shamwari yedu Guggul ine simba zvakanyanya pakurwisa acne.
Ndiani anogona kubatsirwa nazvo? Hmmm !!! Zvakanaka, kusvika pandinogona kutaura, anenge munhu wese. Hakuna kana munhu mumwe chete wandinoziva uyo asingade chimiro chiri nani. Izvi zvinonyanya kuitika kune avo vane vanabolic / androgenic steroids sezvo izvi zvinowanzo kuwedzera mafuta eganda uye zvinogona kuita acne. Rega ndifungidzire - hapana munhu ari kuseka VaHuggulee Guggulee! Chokwadi, anogona kunge aine zita rinosekesa asi mubhuku rangu igamba. Ndekupi kumwe kwaungawana mukomboni inozokubatsira kurasikirwa nemafuta, kunatsiridza chimiro chako checholesterol, uye panguva imwechete unovandudza kuonekera kwako? Ndatarisa kwenguva yakareba uye zvakaoma uye handisati ndawana kana mukwikwidzi mumwe chete.
Ndezvipi Zvakafanirwa Kutorwa?
Uye Kune Mhinduro Dzepamwe Here?
Hongu! Ndisati ndakanganwa, muyero unofanirwa kutora ndewe 30-60mg katatu pazuva nechingwa.
Nguva dzose yeuka kunyange kuti uwane chigadzirwa chine zvakakosha zveGuggul! Zano rangu rokupedzisira nderokuenda kunze uye kunowana murume uyu, kusvinudza ruoko rwake, obva wakohwa mauto ayo anounza.
Warning on Guggulsterone powder
Chine tsvina yakasvibiswa kubva mumiti yeguggul ine zvinhu zvinonzi Guggulsterone powders uye pamwe nevamwe. Zvidzidzo zverabhurasi zvakawana kuti Guggulsterone powders inogona kuchinja kusagadzikana kwecholesterol nechiropa. Guggulsterone powders inogonawo kuwedzera kubudiswa kwehomoni yehutano uye inowanzobatanidzwa mukurema kwekureruka kwekuwedzera kwechikonzero ichocho. Mishonga ine zvidzitiro zveguggul inofanira kutorwa nekuchenjerera nekuda kwehutano hwemigumisiro.
Kwezviuru zvemakore, guggul resin yanga ichishandiswa pakurapa kwechinyakare kurapa rheumatism, arthritis, chirwere chetsinga, mamorrhoid, kusagadzikana kweurinani uye zvirwere zveganda. Mishonga yemazuva ano yawana humbowo hwekuti Guggulsterone powders inogona kuita muchiropa, kugadzirisa kusagadzikana kwe lipid metabolism senge yakakwira cholesterol. Kuburikidza nenzira isingazivikanwe, Guggulsterone powders inowedzerawo kugadzirwa kwetachiona yegland, ichiwedzera simba rekushandisa mumuviri.
Girafu yeGuggul haifaniri kutorwa ne warfarin, aspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drugs kana chero mimwe mishonga inoita kuti ropa rivhare. Guta reGuggul rinogona kuwedzera njodzi yekurapa kwakanyanya kana kusingadzorwi kana kutorwa nemishonga iyi. Girafu yeGuggul inogona kuwirirana ne synthetic thyroid hormone kana mamwe mishonga inoshandiswa kurapa zvinetso zvetachiona. Kutorwa pamwe, mishonga yeguggul uye yehutano inogona kukonzera njodzi yehutano hwehutachiona, iyo inogona kutyisa hupenyu iyo yakawanda zvikuru yehomoni yehutori inobudiswa. Zvinyorwa zveGuggul zvinogona kuderedza zvakanyanya kubudirira kwezvinodhaka propranolol kana diltiazem.
Avo vari kurapwa nokuda kwehutano hwehutano, kusanganisira zvose hypo- uye hyperthyroidism, vanofanira kubvunza chiremba wavo vasati vatora gutti guggul. Vanhu vane chiropa kana chirwere chetsvo havakwanisi kuisa mutezo weguggul zvakakwana uye havafanire kuitora. Muzhinji, bvunza chiremba wako kuti aone kana gucgul yakabudiswa yakachengeteka kwauri.
Zvimwe Zvimwe Zvinobudirira Pamwe
Shanduko shoma yesayenzi inowanika pane zvinogona kutyisa gucgul extract. Hazvizivikanwe kana guggul yakachengeteka panguva yekuzvitakura, asi nekuda kwemigumisiro yehomoni yehutori uye lipid metabolism inofanira kunge ichidziviswa. Guta reGuggul rinogona kukonzera misoro, kusuruvara, kushungurudzika kwepamuviri uye kukurumidza. Allergic reaction to extract guggul yakataurwa.
Guggulsterone powder isati yakakura steroid hormone receptors, uye inozivikanwa kuva nemabasa anotevera:
Androgen mutoror antagonist (Ki = 240 nM)
Farnesoid X mutevedzeri wemukati (IC50 = 5-50 μM)
Pregnane X receptor agonist (EC50 = 2.4 μM ((Z) -shamwari))
Guggulsterone powder yakawanikwa mune tsvakurudzo yemhuka kuti iite mumuromo; iyo ine absolute bioavailability ya42.9% mushure mekunge mutemo uchitungamirirwa mumakonzo, nehafu yehupenyu hwemaawa anopfuura 10 mumarudzi aya, zvichiratidza maitiro akanaka e pharmacokinetic.
Raw Guggulsterone Poda Kudzingisa
Nzira yekutenga Guggulsterone powder kubva kuAASraw